Ny Apple TV 4 dia manome antsika fomba fijery mahavariana kokoa | Vaovao IPhone
Ny Apple TV 4 dia, angamba, iray amin'ireo vokatra antenaina indrindra ary nahatonga ny fanantenana ambony indrindra amin'ireo farany natolotry ny orinasa paoma. Efa taona maro izay no tsy nahazo fanavaozana sy ity farany mampanantena ny hampifaly an'ireo izay mividy ity fitaovana vaovao ity, mbola tsy azo vidiana amin'ny besinimaro.
Miaraka amin'ny fanavaozana lehibe na eo amin'ny lafiny hatsarana na ny fiasa ary ny fampidirana an'i Siri, ny zavatra niainantsika niaraka tamin'ity sampan'ny vokatra Apple ity dia mampanantena hanome fiovana mahery vaika. Ankoatr'izay, manaraka ny maximin'ny an'ny Cupertino, tadiavin'ny vokatra mijery tsara amin'ny fahitalavitra na dia tsy mampiasa azy aza isika, mampiditra sary an-tsary tena mahavariana.
Noho izany, nanapa-kevitra i Apple fa hampiditra fomba fijery voromahery roa vaovao amin'ny sehatry ny screensaver, mamela antsika manidina ambonin'ny London (fahitana izay mahalasa adala ahy manokana) na ny Great Wall of China tena fitsaboana ny maso. Amin'ireto fomba fijery roa ireto dia ampiana ireo izay efa nisy marina indrindra ahafahantsika mamantatra nosy sy ireo toerana manodidina azy. Mazava ho azy, araka ny tondroin'ilay anarana, dia screensaver fotsiny izy ireo, koa tsy tokony hanantena isika fa afaka mifanerasera na manao karazana hetsika miaraka amin'izy ireo.
Mazava ho azy, tsy iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny fitaovan'ny orinasa vaovao io - ary tsy nampoizina koa izany. Na izany aza, ankasitrahana hatrany fa ny toetra mampiavaka ny vokatra dia araraotina mba hampidirana ireo karazana singa ahafahantsika mivoaka mihoatra ny fananana endrika mainty mampiseho amintsika ny fotoana na ny endrika, ny tarehimarika ary ny soratra mifandimby tsy misy ifandraisany firy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Apple TV 4 dia mampiditra pikantsary vaovao mahatalanjona
Apetraho amin'ny fisintomana izy ireo !!!! 🙂
Hitan'izy ireo ny fomba hifehezana ny iPhone amin'ny alàlan'ny onjam-peo